Voaisotra ho tsy heloka intsony ny fiarahan’ny samy lehilahy na samy vehivavy any Angola amin’ny lalàna famaizana vaovao · Global Voices teny Malagasy
Manasazy ny fankahalana pelaka ihany koa ny fehezan-dalàna famaizana vaovao
Voadika ny 06 Avrily 2021 4:19 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, Français, Ελληνικά, Nederlands, Esperanto , Português
Mpikambana ao amin'ny Fikambanana IRIS Angola. Sary avy amin'ny arisivan'ny fikambanana, nahazoana alalana avy amin'ny mpanoratra.
Nanan-kery nanomboka ny 11 Febroary ny fehezan-dalàna famaizana vaovao any Angola, izay manaisotra tsy ho heloka ny fifandraisana eo amin'ny olona mitovy fananahana sy manasazy ny herisetram-pankahalana pelaka.
Nanafoana ny lalàna manasazy ireo izay “manaram-po amin'ny fanao ratsy amin'ny natiora” ilay fehezan-dalàna.
Hita ao amin'izany ny sazy mavesatra amin'ny herisetra vokatry ny fanavakavahana mifototra amin'ny fironana ara-pananahana, ankoatra ny zavatra hafa. Manasazy roa taona an-tranomaizina izay rehetra tsy mety mampiasa olona noho ny fironany ara-pananahana ihany koa ny lalàna.
Tsy miresaka momba ny fanambadiana ara-dalàna eo amin'ny olona mitovy fananahana ny fehezan-dalàna vaovao.
Nanatevin-daharana ireo firenena Afrikana vitsy an'isa izay tsy manameloka ny fiarahan'ny olon-dehibe mitovy fananahana i Angola. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, Afrika Atsimo, Seychelles, Mozambika, Cap Vert, Malawi, Botswana, ary Gabon no nanala na nanitsy ny lalànany tamin'ny fomba ara-dalàna mba tsy hanamelohana ny fifandraisana toy izany.
Tamin'ny taona 2014, niantso ny fanjakana Afrikana rehetra hanao toy izany ny Vaomiera Afrikana misahana ny Zon'olombelona sy ny Zon'ny Vahoaka:
Fantaro ny loza ateraky ny herisetra sy ny endrika fanavakavahana hafa rehetra atao amin'ny olona noho ny fironany ara-pananahana sy ny maha-lahy na maha-vavy azy ireo, ary mametraha lalàna miaro ny olona LGBTIQ+ amin'ny herisetra sy ny fanavakavahana ho mpikambana ao amin'ny sokajy marefo, araka ny notakiana tamin'ny Fanapahan-kevitra laharana faha 275 nataon'ny Vaomiera Afrikana misahana ny Zon'olombelona sy ny Zon'ny Vahoaka.
Nanafoana ny fanamelohana ny fiarahan'ny pelaka tamin'ny taona 2015 i Mozambika.
Nialoha an'i Mozambika anefa i Angola tamin'ny famelana ny fisoratana anarana IRIS, fikambanana iray hiarovana ireo vitsy an'isa manana fironana ara-pananahana, tamin'ny taona 2018, zavatra izay nolavin'i Mozambika hatao tamin'ny fikambanana Lambda.
Miasa amin'ny fanabeazana sy amin'ny fanentanana ny besinimaro momba ny fitovian-jo na inona na inona fironana ara-pananahana na ny maha-lahy na maha-vavy azy ny Lambda. Efa nanomboka tamin'ny 10 taona lasa no naneren'ny Lambda ny governemanta Mozambikana mba hanaiky ara-dalàna ny vondrona ho “fikambanana”, nefa tsy nahovoka.
Ny fankatoavana ny fehezan-dalàna famaizana vaovao any Angola izay nanafoana ny fanamelohana ny fiarahan'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy noho izany dia niteraka fanehoan-kevitra isankarazany, indrindra ireo izay nanantena fa hitondra fandeferana bebe kokoa eo amin'ny fiarahamonina Angoley ny lalàna.
Fifaharan'ny LGBTQ manerana ny planeta: nanafoana ny fanamelohana ny maha LGBTQ ao amin'ny firenena i Angola tao anatin'ny fanapahan-kevitra manan-tantara.
Nankatoavina tamin'ity herinandro ity ny lalàna, izay nolaniana tamin'ny volana Novambra 2020 ary manan-kery amin'ity faran'ny herinandro ity sy manova ny fehezan-dalàna famaizana ao amin'ny firenena Afrikana. Mandràra ny fanavakavahana atao amin'ny olona LGBTQ ihany koa ny fanovana.
Hita fa làlana misokatra ho an'ny manampahaizana momba ny zon'olombelona ao amin'ny firenena ny fanovana, hoy ny mpikatroka Paula Sebastião tamin'ny BBC Focus on Africa.
Hahafahantsika mamaly ny fitakiana samihafa manomboka izao ity fehezan-dalàna famaizana ity, ary ahafahantsika manokatra fifanakalozan-kevitra momba ny asa ihany koa, izay iray amin'ireo tolona lehibe ataon'ny vondrom-piarahamonina LGBTQI+…